WordPress को लागी सर्वश्रेष्ठ घटना थिमहरू Martech Zone
बुधबार, अप्रिल 1, 2015 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
हामी ल्युकेमिया र लिम्फोमा सोसाइटीको लागि हाम्रो दोस्रो वार्षिक कोष स for्कलनकर्ताको तयारी गर्दैछौं संगीत र टेक्नोलोजी महोत्सव यहाँ इंडियानापोलिस अप्रिल २ on मा। गत वर्ष हामीले $०,००० भन्दा बढि उठायौं र हामी यो वर्ष हराउने आशा गरिरहेका छौं।
यस वर्ष हामीले घटनालाई सम्झन सजिलो बनाउनको लागि पुन: ब्रान्ड गर्ने निर्णय गर्‍यौं, र हामीले गत बर्षमा अतुलनीय रमाईलो प्रतिबिम्बित गर्ने साइट राख्ने छौं। पुनःब्रान्डिंगमा हाम्रो आनन्द छिट्टै रोकियो, यद्यपि हामीले घटनाहरूका लागि विकसित गरिएको वर्डप्रेस थिम पछि वर्डप्रेस थिमको परीक्षण गरेका थियौं। यसलाई सफासँग राख्नको लागि, तिनीहरूले भर्खर चुसे।
वास्तवमा, सबै भन्दा राम्रो मूल्या .्कन गरिएको कार्यक्रम थिम हाम्रो मनपर्ने WordPress WordPress विषयवस्तु साइटले हामीलाई हप्ता फिर्ता सेट गर्‍यो किनकी हामी यसलाई सेट अप कसरी गर्न सक्दैनौं। उदाहरण डाटा, भयानक कागजात, र शून्य समर्थन को अभावले हामीलाई हार मान्न धकेला।
हामीसँग यस्तो ठूलो भाग्य छ कि म अर्को थिम खरीद गर्न ईमानदारीसाथ हिचकिचाएको थियो ... तर म शोथिममा उत्रें र उनीहरूको प्रस्ताव, साथै उनीहरूको ध्यान केन्द्रित गर्दै, घटना विषयहरूमा केन्द्रित थिए।
केही घण्टा भित्र मसँग साइट पूर्ण डिजाइन गरिएको थियो विषयवस्तु फज गर्नुहोस् र कुनै समस्या बिना नै जनसंख्या! यसले इभेन्टब्रिट टिकटिंग विजेटहरू पनि राम्रोसँग मिलाएको छ!
घटना र सम्मेलन विषयवस्तुहरू पनि संवेदनशील छन्, तपाईंको घटना साइट वा ब्राउज गर्न माइक्रोसाइट सुन्दर बनाउँदै - साना स्क्रीनहरूमा पनि। हामी विषयवस्तुहरू यति धेरै प्रेम गर्दछौं कि हामी एक सम्बद्धको रूपमा साइन अप गर्दछौं र ती पोस्टहरू मार्फत ती लिंकहरू छन्। आशा छ तपाईंलाई पनि उनीहरू मनपर्दछ हामी गर्छौं - र हाम्रो कार्यक्रममा अप्रिल २th लाई तपाईलाई भेट्नुहुनेछ!
साईड नोट: अर्को वर्ष, म निश्चित छु कि हामी बच्चाको विषयवस्तु अनुकूलित गर्नेछौं जुन कि कडा ब्रान्डि offers प्रदान गर्दछ ... तर हामी यस विषयवस्तुसँग पनि धेरै प्रभावित छौं!
टैग: सम्मेलन विषयवस्तुसम्मेलन विषयवस्तुकार्यक्रम थिमshowthemesvertoh विषयवस्तु
तपाईंको नयाँ एजेन्सीको लागि निर्माण निर्माणको लागि १२ चरणहरू
मई 10, 2015 मा 6: 56 एएम
राम्रो देखिन्छ! म सँधै जेनेरेट प्रेसको कसम खान्छु। यो घटना तिर लक्षित छैन तर एक राम्रो राम्रो खालि क्यानभास छ तपाई जस्तोसुकै प्रकारको हेरचाह सिर्जना गर्न को लागी।